Tamin'ny taona 1529 dia bnivadika ho ady an-trano ny fifandrafiana nisy teo amin'ny tanàna tsy mitovy finoana. Tamin'ny 10 Oktobra 1531 dia nisahana fitaizam-panahy sy mpitondra fanevan'ny tafika soisa protestanta i Zwingli, ka naratra tamin'ny ady nifanaovana tao Kappel, avy eo novonoin'ny miaramila nandresy izy ny ampitson'io. Taorian'ny nahafatesany dia nitsahatra ny fielezan'ny Fanavaozam-pivavahana tany Soisa, ka ny ampahany amin'ny mponina dia Protestanta fa ny ampahany Katolika.
Ny teolojian'i Zwingli dia atao hoe zwinglianisma koa.
Araka ny hevitr'i Zwingli, ny vatofehizoron'ny teolojia dia ny Baiboly. Maka hevitra amin'ny Soratra Masina i Zwingli rehefa nanoratra boky. Apetrany ambonin'ny loharano hafa rehetra, toa ny konsily ekiomenika sy ny Rain'ny Fiangonana, ny Soratra Masina, na dia tsy misalasala aza izy amin'ny fampiaana loharano hafa hanohanany ny heviny. Ny ainga fototra mitari-dalana ny fivoasana ataon'i Zwingli dia avy amin'ny fanabeazana azony tamin'ny rasionalisma sy ny homanisma sy tamin'ny fahazoana ny tian'ny Baiboly ho lazaina araka ny fomban'ny fanavaozam-pivavahana. Laviny ny fanaovana fivoasana ara-bakiteny ny andalana ao amin'ny Soratra Masina, tsy sahala amin'ny an'ny Anabatista, mampiasa fivoasana am-panoharana izy ka fomba fiasa nohazavainy ao amin'ny A Friendly Exegesis (1527) izany. Misy fifandraisana am-panoharana na ara-tandindona ohatra eo amin'ny batisa sy ny famorana ary eo amin'ny eokaristia sy ny paska jiosy. Nifantohany koa ny lahatsoratra manodidina (konteksta) sady niezaka nanakatra ny tanjona kendrena ao ambadik'izany izy, ka manao fampitaha andalan-tSoratra Masina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulrich_Zwingli&oldid=976347"
Voaova farany tamin'ny 30 Oktobra 2019 amin'ny 12:41 ity pejy ity.